Ukukhanselwa kwezibeletho, imiphumela, ukukhulelwa. Monthly kanye nokukhanselwa kokukhulelwa.
Imiphumela yokuqeda amaphilisi okulawula ukuzalwa
Izindlela zokuvimbela izitho zomzimba - indlela yesimanje, ethembekile, ephephile yokuvimbela, cishe abesifazane abangama-50% abaneminyaka yobudala yokuzala bakhetha OK. Lokhu kungenxa yokuthi ngaphezu kokusebenzisa kwayo ngokuqondile amaphilisi e-hormonal kuye kwaveza umphumela wokwelapha ngezifo zesifo somzimba kanye nesifo sofuba, ukunciphisa ubuhlungu obuhlungu kanye nokuvama kokuphuma kwamagciwane, kunciphise i-PMS, kuvimbela izifo ezivuthayo ezithombeni zomzimba. Ukuqedwa kwamaphilisi okulawula ukubeletha kufanele kwenziwe ngendlela efanele - lokhu kuzosiza ukunciphisa imiphumela engathandeki "ye-withdrawal syndrome".
Izizathu zomuntu ngamunye zokukhansela OK:
isinqumo sokubeletha umntwana;
ukwesaba izinkinga ezihlobene nokuthatha ama-hormone;
izinkinga zempilo ezinzima zavela;
isinqumo senziwa ukuvikela ngolunye uhlobo lokuvimbela ukukhulelwa;
ukuqala kokukhulelwa ngemuva kokuthatha izisu zomlomo.
Izimbangela zokukhansela okuphuthumayo kwezinqubo zokukhulelwa:
isifo sesibindi, isifo sikashukela, isifo sofuba esingalawuleki;
ukuhlukumezeka, i-oncology, ukukhubazeka okukhulu okubukwayo;
ukuhlinzwa okungekho emthethweni.
Imiphumela yokukhansela OK
Ukuyeka ukuthatha amaphilisi e-hormonal kwandisa umsebenzi wama-ovari, ukungabi khona kokudla okuvamile ngaphandle kwe-gestagens kanye ne-estrogens kunomthelela "ekuvinjisweni" kwe-ovulation. Ukuvinjelwa komsebenzi we-gonadotropic we-pituitary gland usuphelile, ukukhiqizwa kwe-hormone yokuvuselela kanye ne-follicle kuvusa.
ukubambezeleka kokuya esikhathini. Izazi ze-gynecologists ziqaphele ukuthi uma lo mjikelezo uvamile ngaphambi kokuthatha ukukhulelwa kwe-hormonal, akufanele kube khona ukungasebenzi ngemuva kokukhansela. Uma ukuya esikhathini kuyashesha, kufanele uxhumane nodokotela wakho ukulawula ukukhulelwa;
isimo sengqondo siyashintsha;
ushintsho emjikelezweni wokuya esikhathini. Ngemuva kokuqedwa komjikelezo wokukhulelwa kungaba mfushane / isikhathi eside. Uma ubude bomjikelezo buhluka phakathi kwezinsuku ezingu-21-36, asikho isidingo sokukhathazeka, ngaphandle kwalokho kuphakanyiswa ukubonana nodokotela;
ubuhlungu esiswini esingaphansi. Ehambisana nomsebenzi okweqile wama-ovari, ukuqala ngemva kwekhefu ukusebenza ngokugcwele, ngokuvamile i-syndrome ebuhlungu idlula ngokushesha futhi ayidingi ukulungiswa;
okuqukethwe okunamandla kakhudlwana esikhumba / izinwele, ukubonakala kwe-acne.
Ukuya esikhathini esikhathini esiyizinyanga ezintathu kuya kwezi-6 emva kokuqedwa kwe-OK - lo mkhuba ujwayelekile, akukho-pathology lapha. Ukuvuselelwa kwesistimu yokuzala kudinga isikhathi, lapho:
inkambo yesigaba se-secretary sokujikeleza kokuya esikhathini isijwayelekile;
ukubuyiselwa kwezinguquko ze-atrophic endometrium kuqala;
ikhono le-endometrium ukufaka iqanda elivundisiwe livuselelwa;
sishintsha imvelo yesisu, kunciphisa i-viscosity ye-mucus yomlomo wesibeletho.
Ukulibaziseka okwesikhashana ekukheni ukuphuma esikhathini kungase kubonise ukuqala kwe-amenorrhea, okubangelwa uhlelo lokugcina lwe-endocrine noma izifo ezithathelwana ngocansi (isifo sofuba, isandulela ngculaza, i-syphilis, i-gonorrhea). Kukhona nezizathu ezingathí sina - i-cyst esibelethweni, i-polycystic ovary, i-oncology.
Ukwesulwa kokukhulelwa nokukhulelwa
Ngemuva kokuphela kokuthatha izisu zokubeletha ngomlomo, ukwenziwa kwe-ovulation, abesifazane abaningi bangakhulelwa ingane engakapheli iminyaka engu-1-2. Ngokuvamile, ukukhulelwa kwenzeka cishe masinyane ngemva kokuba umuthi uphelelwe - lokhu kungenxa yokusebenza okusebenza kwama-ovari emva kokuphumula okufakelwayo. Isikhathi sokuqala sokukhulelwa sincike esikhathini sokuthatha amaphilisi. Uma ingadluli izinyanga ezingu-6, ungalinda ukukhulelwa okusheshayo. Uma owesifazane evikelekile iminyaka engu-3 noma ngaphezulu, izinkinga zingenzeka. Izazi zincoma ukuthi ukwesulwa kokubeletha kwe-hormonal kwenziwa ezinyangeni ezimbalwa ngaphambi kokukhulelwa okulindelekile - lokhu kuyadingeka ukuvuselelwa okuphelele kwesimiso se-hormonal.
Imithetho yamathebhulethi alahlekile / akhohlwe
Ithebhulethi eyodwa ayitholakali: ukubambezeleka ngaphezulu kwamahora angu-12 (amahora amathathu "isiphuzo esincane") - thatha ithebhulethi engabanjwanga, qhubeka nokumukelwa kuze kube sekupheleni komjikelezo, ukunamathela kuhlelo olujwayelekile. Ukuphumula kwamahora angaphansi kuka-12 - uphuze iphilisi elingabanjwanga, qhubeka nenqubo evamile.
Amaphilisi angu-2 nokuningi: thatha amaphilisi amabili nsuku zonke kuze kube yilapho kujwayelekile ukuhlelwa kwesimiso esivamile kanye nokukhulelwa ngokweqile ngeviki lekhondomu. Lapho ukuphuma kuvela, yeka ukuthatha amaphilisi, qala iphakheji entsha ngesonto.
Vomiting emahoreni amathathu okuqala emva kokuthatha iphilisi - thatha iphilisi elengeziwe.
Isifo sohudo ngaphakathi kwezinsuku ezingu-2-3 - izinyathelo ezengeziwe zokukhulelwa kuze kube sekupheleni komjikelezo.
Ikhefu ekuthathweni kokukhulelwa
Uma kungabikho ukuphikisana kokusebenzisa izakhi zokuvimbela ukuvimbela imithi (okungaphezulu mayelana nokukhulelwa kwe-hormonal kungaba khona lapha ) njengendlela yokuvikelwa ekukhulelweni okungenakulinganiswa kungaba yisikhathi esingenamkhawulo. Kwakuvamile ukuthi kwakudingeka ukuthatha amakhefu okwamukela okwakulungile ukuze ama-ovari "angakhohlwa" umsebenzi wawo. Namuhla, ochwepheshe bezokwelapha bathi ukusetshenziswa kwesikhathi eside kwamathebulethi akunawo umonakalo ohlelweni lwesisu lokuzala, ngokuphambene, ukuphazamiseka ekwamukelweni kuphazamisa uhlelo lwe-endocrine, ngoba baphoqa umzimba ukuba uvumelane nokuthatha umuthi kuqala, bese uvuselela ukuqeda i-OC. Ngemuva kwezinsuku ezingu-21 zokungenwa, owesifazane wenza ikhefu elide ngeviki, lapho ama-ovari asebenze ngokulinganisela, ngakho-ke ukuphumula ukuphumula ama-ovari akudingeki kwenziwe.
Amaphilisi okulawula ukubeletha nemiphumela yawo
Izindlela zokubeletha ezingcono zomlomo
Amaphilisi okubeletha uJeanine - ukukhulelwa ngomlomo nge-dienogest
Ama-muffin ane-anyanisi aluhlaza kanye noshizi wezimbuzi
Umfana omuhle ezweni lanamuhla
Kuyinkosikazi yenothi - ungakhohlwa nge-soda
Kanjani ngokushesha ukuletha owesifazane i-orgasm?
Isaladi iklabishi ebomvu, iklabishi yePeking kanye ne-walnut
Kungani umuntu engathandi ukwamukela usizo?
Ubuhlungu emadolweni, amakhambi abantu
Ikhekhe nge-apple sauce kanye ne-icing eluhlaza
Ukudla ngokumelene nokuqothulwa